ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक झन्डा बोकेर औद्योगिक क्षेत्रलाई बन्धक बनाउने कार्यले सूर्य नेपालमा काम गर्ने ५ सय ५० महिला बेरोजगार भएका छन्। सूर्य नेपालले उद्योग स्थापना गर्नु अघि स्थानिय महिलालाई ६ महिना तालिम समेत दिएर रोजगारी दिएको थियो। स्थानिय महिलालाई रोजगारी दिएर राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उद्योग बन्द भएपछि खुलाउन संसदीय समिति र केही राजनीतिक दलले दबाब दिएका छन्। तर व्यवस्थापनले भने उद्योग खुल्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएको छ। सूर्य नेपाल स्थापना र बन्दका बारेमा कम्पनीका कर्पोरेट उपाध्यक्ष रवि केसीसँग विज्ञान अधिकारीले गरेको कुराकानी
नेपाली तयारी पोसाकले अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुमाएको बेलामा स्थापना गरेर ब्रान्ड स्थापित गरेर उद्योग बन्द गर्नुभयो नि?
सूर्य नेपाल चुरोटको व्यापारमा सफल भइसकेको थियो। चुरोटमा हामी सफल भएपछि तयारी पोसाकमा जाने सोच बनायौ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकोले हामी नाफालाई मात्र नहेरेर सामाजिक दायित्वलाई समेत हेर्ने गर्छौ। मुलुकमा भएको द्धन्द्धको समाधानमा कम्पनीले कस्तो भूमिका खेल्नसक्छौ भनेर वृहत छलफल भयो।
छलफलमा नेपालको द्धन्द्धको मुख्य कारण रोजगार हो भन्ने निष्कर्षसहित बढी रोजगारी दिने उद्योग खोल्ने सोच बनायौ। आर्थिक रुपमा पछाडी परेका र महिला रोजगारी दिलाउन सकिने तयारी पोसाकनै खोल्ने निर्णय भयो। तर हामीले तयारी पोसाक उद्योग स्थापना गर्ने समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुमिसकेको थियो। सबैभन्दा ठूलो बजार अमेरिकामा कोटा खारेजीका कारण तयारी पोसाकको निकासी निरन्तर घटेको थियो। तयारी पोसाकको लागि सबैभन्दा कठिन अवस्थामा समेत तयारी पोसाकको दिगो विकासको लागि उद्योग स्थापनामा लाग्यौ। सर्वप्रथम हामीले बन्द रहेको तयारी पोसाक उद्योग भाडामा लिएर उत्पादनतर्फ लाग्यौ।
हामीले तयारी पोसाक उत्पादनमा आउनु अघि गाउँगाउँमा गएर एकैपटक पाँच सयलाई तालिम दियौ। जनसंख्याको हिसाबले आधा हिस्सा ओगट्ने महिलालाई रोजगारी दिने उदेश्यले इटालीदेखि प्रशिक्षक ल्याएर सात महिना तालिम दिएका थियौ। हामीले उनीहरुलाई सीपयुक्त बनाउन तीन करोड रुपैयाँ खर्च समेत गरेका थियौ। तालिम अवधिमा महिलालाई दैनिक जीवनयापन गर्न असजिलो नहोस भनेर पूर्ण रुपमा पारिश्रमिक समेत दिएका थियौ। सात महिनापछि व्यवसायी उत्पादन थालेको उद्योग दुईवर्षसम्म राम्रोसँग चल्यो। उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो उपस्थिती जनाएपछि तीस करोडको लगानीमा उद्योगनै खोलेर संचालनमा ल्यायौ। दुई वर्षपछि वाहिरको हड्ताल(राजनीतिक हड्ताल)ले हाम्रो उद्योग प्रभावित हुन थाल्यो। तयारी पोसाक उद्योग एकदिनको बन्दले समेत ठूलो असर गर्छ। जसरी भान्छामा विहानको समयमा मासु र सागको छुट्टै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर फि्रज छैन भने बेलुका गन्आउँछ र सागको मूल्य आधा हुन्छ। भोलिपल्ट विहान गुन्द्रुक बन्छ भने नसुकाएमा कुहिन्छ। त्यस्तै तयारी पोसाक समेत समयमा आपूर्ति गर्न नसकेमा यसको मूल्य आधा हुन्छ। कपडाको फेसन हप्तैपिच्छे परिवर्तन हुन्छ। त्यो समयमा आपूर्ति गर्न नसके फेसन सकिन्छ र कौडीको मूल्यमा समेत बिक्री गर्न सकिदैन। बन्द, हड्तालले समयमा पोसाक निकासी गर्न नसकेर समस्या भयो। दुईवर्षसम्म युनियन नभएको उद्योगमा त्यसपछि स्वार्थहरु आउन थाले। हाम्रो धारणा र भनाई राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने होइन तर कारखानाभित्र राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने हो। तर अहिले ट्रेड युनियनले मजदुरको हकहित कुठित गरिरहेका छन्। युरोप, चीन लगायतका विकसित मुलुकमा सांकेतिक हड्ताल गर्छन्। विरोध गर्दा कामै नगर्ने यो प्रवृतिलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। मजदुरमा एउटा प्रवृति विकास भयो भने उत्पादन बढी भएको बेलामा ट्रेड युनियनले जे मागेपनि पाइन्छ भन्ने मनसाय बोकेको पाइन्छ। यही विकृत सोच परिवर्तन हुन आवश्यक छ।
एउटा सामान्य हड्तालका कारण उद्योगनै बन्द गर्नुभयो नि?
हामी कामदारको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौ। उद्योग बन्द हुनु तीन दिनअघि कामदारलाई बन्दी बनाउने काम भयो। व्यवस्थापनले पटक पटक माग पुरा गर्छौ भनेर जानकारी गराएपनि हड्तालमा उत्रिएका मजदुरले सुनेनन्। कामदारलाई बन्दी बनाउने काम अपराधिक क्रियाकलाप भएको जानकारी गराएका थियौ। हाम्रो आग्रहलाई वेवास्ता गरेपछि स्थानिय प्रशासन, मानव अधिकार र ट्रेडयुनियनलाई बन्दी बनाएको अवगत गराएका थियौ। बन्दी बनाइएकालाई पानी समेत पिउन दिइएन। यो क्रुरताको समेत पराकाष्ठ थियो। भोलिपल्ट प्रशासनले हड्तालमा उत्रिएका मजदुरसँग छलफल गर्दा समेत टुंगोमा नपुगेपछि बल प्रयोग गरेर कामदारको उद्धार गर्‍र्यो। उद्धार गर्ने क्रममा कामदारहरु घाइते भएभने उद्योग तोडफोड भयो। जुन घट्ना ज्यादै अमानविय र अकल्पनिय थियो र हामी समेत अन्यौलमा पर्‍र्यो। थुनछेक गर्ने मजदुरलाई कारवाही नगरेसम्म कारखाना नखोल्ने अडानमा थियौ। विभिन्न चरणको छलफलपछि पनि समस्या समाधान भएन। वार्ता असफल भएपछि समयमा हामीले तयारी पोसाक निकासी गर्न सकेनौ। उद्योग बन्द भएको कुरा क्रेतासम्म पुग्यो। क्रेताले कामदारलाई बन्दी बनाउने कार्य अपराधिक क्रियाकलाप भएको भन्दै अर्डर रद्ध गर्‍र्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अर्डर आउन छाडेपछि करोडौको लगानीमा स्थापना भएको उद्योग बन्दको निर्णय गर्नुपर्‍र्यो। द्धन्द्ध समाधानको लागि केही योगदान दिन स्थापना गरिएको उद्योग बन्द गर्नुपर्दा हामी ज्यादैनै दुःखी छौ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग आउन छाडेपछि उद्योग बन्द गर्ने उपयुक्त अवसरको खोजीमा हुनुहन्थ्यो भन्ने सुनिन्छ नि?
हामीले तयारी पोसाक उद्योग स्थापना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुनै माग थिएन। तयारी पोसाकको कुनै सम्भावना नभएको समयमा यो उद्योग स्थापना गरेका थियौ। हामीले सम्भावना नदेखेको भए यस्तो चुनौतिपूर्ण अवस्थामा उद्योग खोल्ने हिम्मतनै गर्ने थिएनौ। हामीले ब्रान्ड स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वास जित्न सफल भएका थियौ। तयारी पोसाकमा देखिएको अध्यारो बादललाई हटाउँदै अगाडि बढेका थियौ। उद्योग बन्द गर्नकै लागि तीन करोड खर्च गरेर तालिम दिदैन्थ्यौ। सुरुवातमा उद्योग भाडामा चलाउँदा समेत घाटामा थियौ। घाटा हुँदाहुदै हामीले सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधार स्थापना गरेर एसियाकै राम्रो तयारी पोसाक बनाउने प्लान्ट राखेका थियौ। उद्योग घाटामा गएकाले मजदुर हड्ताललाई बहाना बनाएर बन्द गर्‍र्यो भन्नु नकारात्मक विचारधारा राख्नेको भनाई मात्र हो।
अहिले उद्योग स्थापना गर्न सरकार र संसदीय समितिहरुले समेत दबाब दिएका छन्। उद्योग संचालन हुने सम्भावना कतिको छ?
सरकार वा संसदीय समितिले उद्योग खोल्न दबाब दिएर मात्र हुँदैन। सूर्य नेपाल बन्द हुनुको कारणलाई विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। सरकारले उपयुक्त नीति बनाउने हो भने सूर्य नेपालजस्तै अरु धेरै उद्योग यहाँ खुल्न सक्छ। सरकारले सूर्य नेपाल बन्द भएको पाठ सिकेर तत्काल मजदुर सम्वन्धी उपयुक्त नीति बनाउन आवश्यक छ। सरकारले आज खोल भनेर दबाब दिन्छ तर भोलि निर्वाध रुपमा संचालन गर्न पाइन्छ भन्ने आधार के छ?
कुन आधार र विश्वासमा उद्योग खोल्ने?
ट्रेड युनियनको गैरजिम्मेवार प्रवृतिका कारण उद्योग बन्द भएको हो। उनीहरुमा अहिले समेत चेतना आएको देखिदैन। सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको उद्योग चलाउन नसकेको अवस्थामा कुन नैतिकताले निजी उद्योग खोल भन्ने? तीन वटा ट्रेड युनियन राखेर एउटा सहमति हुन्छ तर त्यो सहमति विपरित अन्य ट्रेड युनियन हड्तालमा उत्रिन्छन् र श्रममन्त्रीले अर्को सहमति गर्नुहुन्छ। यस्तो अस्थिर परिस्थितीमा उद्योगीहरु श्रम विवाद सल्टिने आशा गर्न सक्दैनन्।
त्यसैले सरकारले सबै ट्रेड युनियन र उद्योगी राखेर उद्योग, कलकारखानामा राजनीति नगर्ने प्रतिवद्धता गराउन आवश्यक छ।
तयारी पोसाक उद्योग बन्द हुँदा सूर्य नेपालले ल्याउन लागेको अरु उद्योगहरु प्रभावित हुन्छ?
निश्चयपनि यसले हामीले ल्याउन लागेको उद्योगहरु प्रभावित हुन्छन्। हामीले धेरै योजनाहरु अगाडि बढाउने सोचमा थियौ। तयारी पोसाक उद्योग बन्द हुँदा एकपल्ट सोचेर मात्र लगानी गर्ने पक्षमा छौ। तर यो भन्दाभन्दै पनि निराशावादी समेत होइनौ र छैनौ पनि।
उद्योग बन्द हुनुमा ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिनै हो त?
सबैभन्दा पहिला कुनैपनि ट्रेड युनियनले स्वार्थ हेरेर संचालन गर्नुहुँदैन। सबैभन्दा पहिला उद्योगको हितलाई प्रकृति हेर आफ्ना मागहरु राख्छ भने उद्योग धरासायी हुँदैन। वास्तविक समस्या भन्दा केही स्वार्थ राजनीतिक, व्यक्तिगत र सामूहिक स्वार्थ त्याग्न सकेमा कुनै समस्या आउँदैन। अहिले जुन उद्योगमा बढी सेवा दिन्छ त्यही उद्योगमा बढी समस्या किन देखिएका छ? यसमा जो जो सहभागी छन् उनीहरुले मनन् गर्नुपर्छ।
सूर्य नेपाल बन्द हुनुमा व्यवस्थापन दोषी छैन त?
उद्योग बन्द हुनुमा व्यवस्थापन समेत दोषी छ। व्यवस्थापनले गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्दैन। गलत काम गर्ने मजदुरलाई कारवाही गर्न नसक्नुमा म र मेरो व्यवस्थापन दोषी छ। तर गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्न नसक्नुमा धेरै कारणहरु छन्। कुनै गलत काम गर्ने मजदुरलाई कारवाही गर्नु भनेको व्यवस्थापनका अधिकारीलाई ज्यान हत्केलामा राख्नु हो। कानुनी राज नभएको अवस्थामा एउटा व्यवस्थापक निरीह हुन्छ। उद्योगमा अनुशासन कायम हुनसक्दैन र उत्पादकत्व घट्छ।
धेरै उद्योगी व्यवसायी नेपालमा उद्योग चलाउन कठिन छ भन्छन्। तपाई यो भनाईसँग सहमत हुनुहुन्छ?
नेपालमा उद्योग चलाउन त्यति गाहो छैन। संस्थागत सुशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्ववहन गदै उद्योग चलाउन कठिन छ। संस्थागत सुशासनमा चलाएका उद्योगले एउटा नियमभित्र रहेर उद्योग चलाउँछ उसले कुनै सम्झौता गर्न सक्दैन। यहाँ उद्योगले नाफा /घाटा हेरेर चलाउन खोज्यो भने कुनै गाहो छैन तर यसलाई नहेरी सामाजिक उत्तरदायित्ववहन गर्दा उद्योग चलाउन सकिदैन भन्ने उदाहरण हामीमै लागु भएको छ।
उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनहरुले उद्योग खोल्ने बाताबरण बनाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छ नि?
उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनदेखि उद्योगी व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा सही निर्णय भन्दै सर्मथत गरेका छन्। उद्योग बन्द गर्नु नकारात्मक काम भएपनि बधाई आउँदा दुःख लागेको छ। तर सूर्य नेपाल बन्द एउटा क्रान्तिका लागि सहिदले दिएको बलिदानजस्तै हो। सूर्य नेपाल बन्द भएको बेलामा औद्योगिक बाताबरण बनाउन लाग्नुपर्छ। सूर्य नेपाल बन्द भएपनि यही समयमा उपयुक्त बाताबरण बनाएर यस्ता १० वटा उद्योग खोल्नेतर्फ लागौ। सूर्य नेपाल बन्द हुँदा करोडौ क्षति भएको पाठ सिकेर अरु उद्योग बन्द नहुने बाताबरण बनाउन लाग्नुपर्छ। अहिले कुनैपनि उद्योग स्थापना भएपछि मजदुरले सबै जिम्मेवारी उद्योगीको हो भन्ने मानसिकता विकास भएको छ। मजदुरले उद्योगको नाफा/घाटालाई कहिल्यैपनि हेर्ने काम भएन। उद्योगको अवस्था नहेरी सेवा र सुविधाको माग गर्ने प्रवृति व्याप्त छ। उद्योग खुल्नेवितिकै पैसा फल्ने रुख छ फटाफट दिन्छ भन्ने सोच हटाएर उसले बैकबाट ऋण लिएको छ। उसले उत्पादन बिक्री गरेर आएको मुनाफाबाट ऋण तिर्ने र मजदुरलाई सुविधा दिने हो भन्ने कुराको ज्ञात मजदुरलाई हुन आवश्यक छ। मजदुरले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर सेवा सुविधाको माग गरेमा उद्योग समेत निरन्तर संचालन हुने बाताबरण निर्माण हुन्छ। नेपालमै बैक तथा वितिय संस्थाका कर्मचारीले हड्ताल विना राम्रो सेवा सुविधा पाएको उदाहरण छ।